အညောင်းခံပြီး ကောက်ထားတာ မဟုတ်ကြောင်း သက်သေပြ လိုက်တဲ့ “ရှင်ယွန်းမြတ်” – Let Pan Daily
မော်ဒယ်ရှင်ယွန်းမြတ်တင်လိုက်တဲ့ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံဟာ အွန်လိုင်းမှာ အရမ်းကို လူပြော များနေပါတယ်။ ဆံပင်အရောင်ဆိုးထားတယ်၊ ဆံပင်အရောင်လေးလာပြတာပါဆိုပြီး တင်ထားပါတယ်။ ကာလာချိန်း လိုက်တဲ့ ဆံပင်အရောင်ကို ပြတာဆိုပေမယ့် ကြည့်တဲ့သူတွေကတော့ ဆံပင်အရောင်ထက် သူမရဲ့ body အချိုးအစားကိုပဲ သတိထားမိ ခဲ့ပါတယ်။
ဒီပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး တစ်ချို့က တင်ပါး အချိုးအစားပေါ်အောင် တမင်အရမ်းကြီး ကောက်ထားတယ်၊ အတု ဆိုပြီး ဝေဖန်ပြောဆိုသံတွေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေအပေါ် ရှင်ယွန်းမြတ်က ….
feeling နေရာမှာတော့..”မူရင်းကောင်း လို့ မိတ္တူကောင်းတယ်ဆိုတာ ယူ တို့ သိဖို့ကောင်းတယ်.”ဆိုပြီး ရှင်ရှင် ဟာ အညောင်းခံပြီးး ကောက်ထားစရာ မလိုဘူးးဆိုတာ ရှင်းမပြတော့ပါဘူးး မိရှင် အမေကို အရင်ကြည့်ပြီးမှကောက်ထားထားး ကော့ထားသလားးအော် လားး ဆိုတာTeaser နဲ့တင်ပဲ ပရိသတ်တွေကို ကျောချမ်းစေခဲ့တဲ့ “Carbon Dioxide “ယူတို့ပဲ ဆုံးဖြတ် ကြပါ လို့စ်…” ဆိုပြီး တင်လိုက်ပါတယ်။
အညောငျးခံပွီး ကောကျထားတာ မဟုတျကွောငျး သကျသပွေ လိုကျတဲ့ “ရှငျယှနျးမွတျ”
မျောဒယျရှငျယှနျးမွတျတငျလိုကျတဲ့ ဓါတျပုံတဈပုံဟာ အှနျလိုငျးမှာ အရမျးကို လူပွော မြားနပေါတယျ။ ဆံပငျအရောငျဆိုးထားတယျ၊ ဆံပငျအရောငျလေးလာပွတာပါဆိုပွီး တငျထားပါတယျ။ ကာလာခြိနျး လိုကျတဲ့ ဆံပငျအရောငျကို ပွတာဆိုပမေယျ့ ကွညျ့တဲ့သူတှကေတော့ ဆံပငျအရောငျထကျ သူမရဲ့ body အခြိုးအစားကိုပဲ သတိထားမိ ခဲ့ပါတယျ။
ဒီပုံနဲ့ပတျသကျပွီး တဈခြို့က တငျပါး အခြိုးအစားပျေါအောငျ တမငျအရမျးကွီး ကောကျထားတယျ၊ အတု ဆိုပွီး ဝဖေနျပွောဆိုသံတှေ ထှကျပျေါလာခဲ့ပါတယျ။ ဒီလိုပွောဆိုမှုတှအေပျေါ ရှငျယှနျးမွတျက ….
feeling နရောမှာတော့..”မူရငျးကောငျး လို့ မိတ်တူကောငျးတယျဆိုတာ ယူ တို့ သိဖို့ကောငျးတယျ.”ဆိုပွီး ရှငျရှငျ ဟာ အညောငျးခံပွီးး ကောကျထားစရာ မလိုဘူးးဆိုတာ ရှငျးမပွတော့ပါဘူးး မိရှငျ အမကေို အရငျကွညျ့ပွီးမှကောကျထားထားး ကော့ထားသလားးအျော လားး ဆိုတာTeaser နဲ့တငျပဲ ပရိသတျတှကေို ကြောခမျြးစခေဲ့တဲ့ “Carbon Dioxide “ယူတို့ပဲ ဆုံးဖွတျ ကွပါ လို့ဈ…” ဆိုပွီး တငျလိုကျပါတယျ။
စကပျတိုတိုလေး ၀တျကာ ခါးလေးကို လှုပျယမျးပွီး အသညျးယားဖို့ကောငျးအောငျကနတေဲ့ ဆုလှိုငျဝငျး ရဲ့ အမိုကျစား ဗီဒီယိုလေး